1 Ihe E Mere 15 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
1 Ihe E Mere 15:1-29
15 O wee na-ewugasịrị onwe ya ụlọ+ n’Obodo Devid; o wee gaa n’ihu ịkwadebe ebe+ a ga-edebe igbe ezi Chineke, maakwa ụlọikwuu maka ya. 2 Devid wee sị: “Ọ dịghị onye ga-ebu igbe ezi Chineke ma ọ́ bụghị ndị Livaị, n’ihi na ọ bụ ha bụ ndị Jehova họọrọ ka ha na-ebu igbe Jehova+ ma na-ejere ya ozi+ ruo mgbe a na-akaghị aka.” 3 Devid wee kpọkọta Izrel dum na Jeruselem+ iji bugote igbe+ Jehova n’ebe ọ ga na-adị, bụ́ ebe ọ kwadebeere ya. 4 Devid wee kpọkọta ụmụ Erọn+ na ndị Livaị; 5 n’ime ụmụ Kohat, ọ kpọkọtara Yurayel+ bụ́ onyeisi na ụmụnne ya, otu narị mmadụ na iri abụọ; 6 n’ime ụmụ Meraraị,+ ọ kpọkọtara Asaya+ bụ́ onyeisi na ụmụnne ya, narị mmadụ abụọ na iri abụọ; 7 n’ime ụmụ Geshọm,+ ọ kpọkọtara Joel+ bụ́ onyeisi na ụmụnne ya, otu narị mmadụ na iri atọ; 8 n’ime ụmụ Elizefan,+ ọ kpọkọtara Shemaya+ bụ́ onyeisi na ụmụnne ya, narị mmadụ abụọ; 9 n’ime ụmụ Hibrọn, ọ kpọkọtara Iliel bụ́ onyeisi na ụmụnne ya, mmadụ iri asatọ; 10 n’ime ụmụ Ọziel,+ ọ kpọkọtara Aminadab bụ́ onyeisi na ụmụnne ya, otu narị mmadụ na iri na abụọ. 11 Devid kpọkwara Zedọk+ na Abayata+ bụ́ ndị nchụàjà, na ndị Livaị bụ́ Yurayel,+ Asaya+ na Joel,+ Shemaya+ na Iliel+ na Aminadab, 12 o wee sị ha: “Unu onwe unu bụ ndị isi+ nke ndị bụ́ nna ụmụ Livaị. Doonụ onwe unu nsọ,+ unu na ụmụnne unu, unu ga-ebugotekwa igbe Jehova bụ́ Chineke Izrel n’ebe m kwadebeere ya. 13 N’ihi na unu emeghị nke ahụ n’oge mbụ,+ Jehova bụ́ Chineke anyị wesoro anyị iwe,+ n’ihi na anyị achọghị ya dị ka o kwesịrị.”+ 14 Ndị nchụàjà na ndị Livaị wee doo onwe ha nsọ+ iji bugote igbe Jehova bụ́ Chineke Izrel. 15 Ụmụ Livaị wee jiri okporo osisi buru+ igbe ezi Chineke n’ubu ha,+ dị nnọọ ka Mozis nyere n’iwu, dị ka ihe Jehova gwara ya si dị. 16 Devid wee gwa ndị isi n’ime ndị Livaị ka ha mee ka ụmụnne ha bụ́ ndị ọbụ abụ+ jiri ngwá egwú,+ ụbọ akwara+ na une+ na ájà,+ guzoro tisiwe egwú ike ka e wee nụ mkpu ọṅụ. 17 Ndị Livaị wee mee ka Himan+ nwa Joel guzoro, n’ime ụmụnne ya, ha mere ka Esaf+ nwa Berekaya guzoro; n’ime ụmụ Meraraị, bụ́ ụmụnne ha, ha mere ka Itan+ nwa Kọsheya guzoro; 18 ha na ụmụnne ha ndị nọ n’ìgwè nke abụọ,+ bụ́ Zekaraya,+ Ben na Jaeziel na Shemiramọt na Jehayel na Ọnaị, Elayab na Benaya na Measaya na Matitaya na Elifelehu na Mikniya, nakwa Obed-idọm+ na Jeayel bụ́ ndị nche ọnụ ụzọ ámá, 19 nakwa ndị ọbụ abụ bụ́ Himan,+ Esaf+ na Itan, iji ájà e ji ọla kọpa mee na-eti egwú ka ọ na-adapụta ụda;+ 20 nakwa Zekaraya na Eziel+ na Shemiramọt na Jehayel na Ọnaị na Elayab na Measaya na Benaya, ịkpọ ụbọ akwara ndị ha na Alamọt na-adakọ ụda,+ 21 nakwa Matitaya+ na Elifelehu na Mikniya na Obed-idọm na Jeayel na Azazaya, ịkpọ ụbọ akwara+ ndị ha na Sheminit na-adakọ ụda,+ ka ha bụrụ ndị nduzi; 22 nakwa Kenanaya+ bụ́ onyeisi ndị Livaị n’ibu ihe. Ọ na-enye ntụziaka n’ibu ihe, n’ihi na ọ bụ ọkà na ya;+ 23 nakwa Berekaya na Elkena bụ́ ndị na-eche Igbe ahụ nche;+ 24 nakwa Shebanaya na Jọshafat na Netanel na Amesaị na Zekaraya na Benaya na Elịiza bụ́ ndị nchụàjà na-afụsi opi ike+ n’ihu igbe ezi Chineke, nakwa Obed-idọm na Jehaya bụ́ ndị na-eche Igbe ahụ nche. 25 Devid+ na ndị okenye Izrel+ na ndị isi+ nke otu puku otu puku ndị agha ji ọṅụ+ soro na-aga ka ha wee si n’ụlọ Obed-idọm bugote igbe ọgbụgba ndụ Jehova.+ 26 O wee ruo na mgbe ezi Chineke nyeere ndị Livaị aka+ ka ha bu igbe ọgbụgba ndụ Jehova, ha chụrụ oké ehi asaa na ebule asaa n’àjà.+ 27 Devid yi uwe elu na-enweghị aka nke e ji ezigbo ákwà kwaa, tinyekwara ndị Livaị niile bu Igbe ahụ nakwa ndị ọbụ abụ nakwa Kenanaya+ bụ́ onyeisi na-ahụ maka ihe ndị ọbụ abụ na-ebu;+ ma Devid yikwa efọd+ e ji ákwà linin kwaa. 28 Izrel dum jikwa mkpu ọṅụ+ na opi dị iche iche+ na ájà+ na-ebugote igbe ọgbụgba ndụ Jehova, na-akpọsikwa ụbọ akwara na une ike.+ 29 O wee ruo na mgbe igbe ọgbụgba ndụ+ Jehova rutere n’Obodo Devid, Maịkal+ nwa Sọl si na windo leda anya wee hụ Eze Devid ka ọ na-awụligharị elu na-enwe aṅụrị;+ o wee leda ya anya+ n’obi ya.
1 Ihe E Mere 15